SIDEE AYAY CHERRY FAA'IIDO LEH: FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA CUNIDDA CUNTA YAR-YAR OO CALORIE AH? - CHERRY
Cherry - miro la jecel yahay oo badan, laakiin dhammaantood ma qadarinayaan sifooyinka faa'iidada leh ee tan la yaqaan dhammaan berry. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida loo isticmaalo berri loo daaweeyo iyo sida saxda ah ee cherry ay u tahay faa'iido jirka, waxaan sidoo kale tixgelinaynaa su'aasha lafaha cherry, waxyeeladooda iyo faa'iidooyinkooda.
Kaloori iyo walxaha ubaxyada
Cherry - xubin ka mid ah qoyska Rosaceae, oo leh jilif midab leh oo cawl iyo midab leh. Midabka khansiirku waa mid aad u qurux badan - ubaxyo yar yar oo daboolaya laanta oo dhan. Berry waxay leeyihiin dhadhan macaan iyo dhadhan. Iyada oo ku xiran nooca cherry, cherry ayaa ku kala duwanaan kartaa size, laakiin sifooyinka bogsashada iyo contraindications waa dabeecad kasta oo geed. Berry Tani waxaa loo yaqaan dadka tan iyo wakhtiyadii hore. Awowayaasheenu ma ogsoonaanin oo keliya dhadhanka, laakiin sidoo kale waxa ku saabsan faa'iidooyinka ee cherry.
Ma taqaanaa? On the cherry Europe ayaa la soo bandhigay ee I century AD. e. laga bilaabo rome
Haddii aad hore u go'aansatay inaad isticmaasho jeeriga daaweynta iyo ka hortagga cudurrada suurtagalka ah, waa inaad ogaataa sida dhabta ah ee kiimikada kiimikada ay ku jirto.
glucose iyo fructose - 11.3%;
dhirta dhirta - 0.5%.
Fosfooraska - 30 mg;
kalsiyum - 37 mg;
birta 1.4 mg;
potassium - 256mg.
Intaa waxaa dheer, cherry wuxuu leeyahay xaddi badan oo fiitamiin ah oo ah kooxo B, C, PP, iyo sidoo kale folic, citric, malic, succinic, acids salicylic. Ka mid ah waxa faa'iido leh ee jeeriga, waxaa sidoo kale jira lafo: waxay ku jiraan 25-35% asiidh dufan, saliid muhiim ah, glycoside, amygdalin. Xitaa jilifka geedka waxaa lagu jilciyaa walxo waxtar leh, sida tannins, coumarin, amygdalin.
Calorie Cherry: 100 g oo ah nooca berry ah ayaa ku jira 52 kcal.
Qodobbada waxtarka leh ee cherry
Faa'iidooyin ka badan waxyeelladu waxay keenaysaa cherry jidhka bini'aadamka. Isticmaalka ma aha oo keliya inaad caafimaad qabatid, laakiin sidoo kale waxay hagaajisaa niyaddaada sababtoo ah dhadhanka ugu wanaagsan ee berry ah. Shaqada dhammaan qaybaha jidhka ayaa "saxsan" isticmaalka jeeriga.
Waa maxay cherry waxtar leh
First of dhan, jeeriga waa faa'iido leh kuwa, sida ay dhakhtar u qoray, u baahan tahay cunto diirran, iyo sidoo kale kuwa aan haysan cunto - jeeriga u keeno rabitaanka ah inuu cuno. Cherry leedahay saameyn aad u wanaagsan on geedi socodka dheefshiidka ee jirka, taas oo la xidhiidha content of inositol ee berry.
Waa muhiim! Noocyada ugu faa'iido badan ee jeeriga waa Cherry Steppe iyo Guy Victory.
Cherry - bakeeriyada antioksidan ee ka hortagi kara hababka da'da jirka. By iyo ballaaran, cherry xoojiyaa nidaamka wareega, nidaamka dheefshiidka, habka kaadida, iyo sidoo kale hoos u dhigi karaa heerarka dhiigga ee dhiigga. Miro Cherry wuxuu faa'iido u leeyahay raga iyo dumarkaba waxaana badanaa loo isticmaalaa maaha oo kaliya daawada, laakiin sidoo kale ku jira maaddada kookomoolaha, perfumery iyo farmaajo.
Arrin kale oo muhiim ah waa in cherry, inkastoo ay ka kooban tahay kalooriga, jidhka oo dhan u weheliya walxaha lagama maarmaanka ah. Berry waa mid aad u faa'iido leh dadka qaba cudurka macaanka, sababta oo ah muujinta glycemic ee berry this ka badan inta kale.
Miyuu jiraa wax faa'iido leh oo la qalajiyey, la qalajiyey oo la qaboojiyey?
Gerriga la qalajiyey, la qalajiyey iyo la qaboojiyey, iyo sidoo kale godadka johannesesku waxay yihiin uun faa'iido leh sida miro cusub, laakiin waxay sidoo kale keeni karaan waxyeelo. Gundhigyada la qalajiyey waa abaalmarin weyn oo la isku daro iyo shaaha xilliga qaboobaha, marka jirku si gaar ah ugu baahan yahay lahjadda xagaaga, iyo sidoo kale difaac dheeraad ah.
Iyada oo qayb ka mid ah compote ama cawska la qalajiyey cawska ayaa ka caawin kara dagaalka ka dhanka ah hargabka. Sida for jeeriga la qaboojiyey, waa sida faa'iido leh sida berry cusub, oo haynaya sifooyinka dhan - laga bilaabo kaloriyeyaasha si guryaha caafimaad leh.
Ma taqaanaa? Si loo ilaaliyo dhamaan faa'iidooyinka jiiraanka inta lagu jiro ka shaqaynta, waxaa lagama maarmaan ah in ay si habboon u qaboojiso: midkoodna si dhakhso ah loo dhigo ama la kulmo heerkulka "shoog". Waxaa suurtagal ah in la jarjariyo berrito labadaba dhagax, iyo iyada oo aan.
Cinjirta la qalajiyey waxay ka kooban yihiin waxyaabo isku mid ah oo cusub, waxayna keenaan faa'iido iyo waxyeelo isku mid ah. Gerriyada la qalajiyey ayaa si fiican u shaqeeya cudurrada nidaamka wadnaha, si looga hortago istaroogga iyo weerarada wadnaha, iyo sidoo kale haweenka uurka leh, si ay u buuxiyaan kaydka hiddo-celinta folic acid. Cherry nooc kasta oo waa mid macaan leh oo caafimaad leh oo aan keenin oo kaliya raaxada culus, laakiin sidoo kale faa'iido jirka ah.
Isticmaalka jeeriga ee daawada dhaqameed
Muddo labaatan sano ah, cherry ayaa loo yaqaanay bini-aadanka, dadkuna waxay u isticmaalaan waqti isku mid ah ma aha oo keliya karinta, laakiin sidoo kale inay hagaajiyaan caafimaadkooda. Wax badan oo kuwan ka mid ah ku sheeg.
Cunista cunnida si kor loogu qaado difaaca
Cherry loogu talagalay difaaca ayaa ugu muhiimsan sababtoo ah waxaa ku jira hormoon melatonin, kaas oo gacan ka geysanaya hagaajinta hurdada. Qadar yar oo ka mid ah enzimka noocan oo kale ah ayaa sababi kara uur-jiif oo xitaa carqaladeeya hawlaha habka dhexe ee neerfaha. Arrintan awgeed jeeriga waa la wada baabbi'in karaa ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale la qalajiyey oo la qalajiyey. Sidoo kale, si loo wanaajiyo difaac, joogitaanka vitamin C ee ka kooban halis ah faa'iido, taas oo gaar ahaan faa'iido u leh jirka inta lagu jiro xilliga qaboobaha.
Qodobbada waxtarka ee johanneseska habka wareegga
Inta badan marka laga hadlayo sifooyinka wanaagsan ee jeeriga, su'aasha ayaa soo baxday: ma cadaadisku sii kordhayaa? Waxaa jira hal jawaab oo keliya: marka laga reebo cherry, waxay caawisaa in ay caadi u noqoto cadaadiska sababtoo ah maaddooyinka sare ee oxycoumarins waxayna yareynayaan halista wadno-qabadka iyo istaroogga. Waxa kaliya ee kor u qaadi kara cherry - hemoglobin, laakiin waxay leedahay saameyn faa'iido leh ee jirka.
Waa muhiim! Shaaha oo lagu daro jeeriga ama casiir cusub ayaa ka faa'iideysan kara cayaaraha kuwaas oo inta badan ka shaqeeya tababarka wadnaha.
Faa'iidooyinka geedka ee kelyaha
Gorma waxaa ku jira qadar badan oo ah walxaha pectic, kaas oo ka caawiya jidhka si ay ula qabsadaan slags iyo ka hortagtaa dhismaha dhagxan, iyo sidoo kale ciid ee kelyaha. Decoction ah ee jeeriga ayaa ka caawin kara Hureecada iyo urate, oo sidoo kale ka qayb qaadashada ka hortagga iyo daaweynta cudurka kalyaha. Karinta karootiga waa mid sahlan: 10 g oo ah nooca berry qallalan ah waxay u baahan yihiin in ay ku shub 200 ml oo biyo ah karkaraya iyo isku kari ilaa 30 daqiiqo. Kadibna ka saar foornada kuleylka iyo filter, ku dar biyo la kariyey. Natiijo ahaan, ugu yaraan 250 ml oo ah dareeraha waa inay joogaan. Waa lagama maarmaan in la cabo marinkaas oo kale maalin kasta qaybo yaryar.
Saameynta jeeriga ee nidaamka dheef-shiidka
Cherry wuxuu kordhiyaa rabitaanka cuntada oo wuxuu saameeyaa wax soo saarka hoormoonka cuntada, kaas oo horayba u saameyn ku yeeshay nidaamka dheef-shiidka. Noocyada pectins waxay ka caawisaa ka hortagga caloosha iyo shubanka. Asaasiga dabiiciga ah ee ku jira johrigu wuxuu kiciyaa wax soo saarka casiirta caloosha iyo abuuritaanka microflora faa'iido leh ee ugu dhaqsaha badan ee cuntada. Inositol ku jira johannesörn ayaa sidoo kale ka qaybqaata caadeysiga dheefshiidka, waxay yareysaa khatarta buurnaanta ama dystrophy.
Ma taqaanaa? Si looga hortago cudurrada nidaamka dheef-shiidka, waa ku filan in la cuno 20 jeer oo jeex ah maalintii.
Su'aalaha ku saabsan miisaanka lumitaanka, su'aashu waxay soo baxaysaa: miyuu khudradda ka faa'iideysan karaa? Dabcan, waa mid waxtar leh, maxaa yeelay waa ka wanaagsan inaad isticmaasho jeeriga ee foomka wax laga sameeyey - miro ama casiir. Waxay koontaroolaysaa duufaanta, taas oo bedeleysa cabitaano kasta oo kaarboon. Chlorogenic acid, taas oo laga helay tiro badan oo jeeriga, dardar galinta carbohydrate iyo lipid metabolism, taas oo ka qayb qaadata miisaan lumis iyo sonkorta dhiigga hoos u.
Isticmaalka cherry ee cudurada caloosha
Decoctions ka soo laamood ee jeeriga waxaa loo isticmaalaa cudurada caloosha, sababtoo ah xaqiiqada ah in caadiyan habka dheefshiidka. Shaaha, kaas oo la diyaarin karaa ma aha oo kaliya laga bilaabo berry, laakiin sidoo kale caws iyo caleemo, waa ku habboon tahay in la yareeyo xanuunka guud ee xanuunka iyo geedi socodka bararka. Ujeedooyinka daaweynta, waxaad isticmaali kartaa faleebo ee jilif ee geedka, taas oo u wanaagsan boogaha caloosha.
Sida loo isticmaalo jeeriga ee ujeedooyinka qurxinta
Maaddada isweethanka, cherry waa caan u ah caan u ah sababtoo ah dhadhan jilicsan oo jilicsan. Badanaa, dadka curyaanka ah ee xirfadlayaasha ahi waxay ku talinayaan isticmaalka maaskarada cherry ee milkiilayaasha miraayad leh, sababtoo ah jeeriga ayaa ku caawin doona in ay la qabsadaan finanka iyo furayaasha furan. Casiirka Cherry waxaa badanaa loo adeegsadaa timo iyo xannaaneeye, ka hortagidda dhibaatada cakiran sida "faddar" oo timir ah.
Maaskarada timaha ayaa si sahlan loo diyaarin karaa, waa ku filan in laga saaro lafaha dhagaxa ka dibna ku daboolaan weelka soo-saarka wajiga. Haddii aad go'aansato in aad isticmaasho jeeriga ee dagaalka lagaga hortago finanka, markaa dib-u-eegista maaskarkan waa sida soo socota: 2 tbsp. Qaadooyin isku darka ah chips isku darka leh 1 tbsp. beedka ah ee burka baradho, qaaddo ah casiir liin iyo 1 tsp. Hadeydaan Wixii timaha, waxaad isticmaali kartaa casiir cherry ama galiyey of jeeriga. Juice Cherry waxaa loo isticmaalaa in lagu daro dareerjir baradho ah: istaarijka waxaa si tartiib tartiib ah loo soo bandhigay casiirka iyo kiciyey si joogta ah ee kareemka labeen dhanaan. Haddii aad si joogto ah u isticmaasho maaskarada, timahaagu waxay heli doonaan iftiin caafimaad leh iyo silkin.
Faleebo ee cherry caleemo ah ayaa ku talineysa in la raaciyo timo daciif ah timo.
Cherry iyo Karinta
Cherry ee karinta - mid ka mid ah nooca ugu caansan sababtoo ah helitaanka. Diyaarinta cuntada iyo cabitaanka, waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta, taas oo ka dhigaysa jeeriga wax soo saarka guud. Laga soo bilaabo carruurnimada, waxaan ognahay dhowr saxan oo isticmaalaya jeeriga, laakiin xaqiiqda ah kala duwanaanta delicacies leh jeeriga waa cajiib ah.
Laga soo bilaabo jeeriga waxaad samayn kartaa wax kasta oo khibradda khabiir takhasus leh ku filan: waxaa ku habboon diyaarinta suugo berry, kuwaas oo si fiican ugu habboon suxuunta hilibka; saladhyada (gaar ahaan isweydaarka); for macmacaanka (sababta oo ah cherry calorie hooseeyo waa ku fiican yahay samaynta jelly iyo jams). Sida cabitaanada laga samayn karo jeeriga, halkan sidoo kale waxaad hubsan kartaa: geedka oo dhan isku midka ah - sharoobada iyo jelly, shaah, casiir iyo compote - wax yar oo ka mid ah waxa la samayn karo.
Waa muhiim! In lagu kariyo, waxaad isticmaali kartaa ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale caleemaha - ilaalinta, samaynta shaaha, sharoobada
Contraindications for cunista jeeriga
Cunista cunnooyinka tiro badan ma noqon karto dadka qaba dhibaatooyinka qaarkood, kuwaas oo:
haddii aad leedahay cillad sii kordhaysa ee caloosha;
cudurada joogtada ah iyo cudurada sambabada;
marxaladaha ugu dambeeya ee gastroenteritis;
haddii mareenka mindhicirka uu daciif yahay;
oo uur leh shuban.
Haddii aad cunayso cherry aad u badan, waxaad ku heli kartaa dhibaatooyin badan oo leh dhaldhalaalka ilkaha, Sidaa daraadeed, waa in aad ilkaha aad nadiifisaa ama ugu yaraan ku luqluqo afkaaga isla markiiba markaad cunaysid jiir. Marka ay timaado khatarta berrito, waxaa habboon in la xasuusto ku saabsan cayayaanka: waxa ay ka kooban yihiin glycoside iyo amygdalin, taas oo, haddii loo isticmaalo si xad dhaaf ah, waxay keeni kartaa soo saarida hydrocyanic acid ee xiidmaha. Gaar ahaan waxaad u baahan tahay in aad u fiirsato miraha, kuwaas oo ku yaal lafaha: isticmaalka dhexdhexaad ah, waxay ka takhalusi doonaa turqo, iyo isticmaalka xad-dhaaf ah ku sumo jidhka.
Jordiyadu waa miro badan oo caafimaad leh oo aan dharka kaliya ku qurxin karin, laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa jidhka inay la qabsadaan cuduro kala duwan. Tani waa xaqiiqada ah ee dhadhanka iyo dheefta, kaas oo ka farxin doona qof kasta.